University of California, Berkeley - Ọmụmụ na USA. EducationBro
University of California, Berkeley Nkọwa
Students (ihe ruru.) : 38000
Echefukwala atụle University of California, Berkeley
Idebanye aha na University of California, Berkeley
University of California, Berkeley bụ a ọha na eze na alụmdi na e hiwere na 1868.
Nkuzi ụgwọ na University of California, Berkeley na- $40,000 (Aprox.).
The University of California, Berkeley, mgbe kwuru na dị Cal, na nsogbu-anọ na-San Francisco Bay. A, 95 percent ma ọ bụ karịa nke na-abata freshmen na Berkeley kpebie ime ihe na kampos. E nwere ihe karịrị 1,000 -amụrụ òtù, sitere na site na ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche ka a glaịdịn aka club na ihe niile dị n'etiti. Berkeley na-nwere a eme ihe iche iche Greek ndụ na Ọtụtụ fraternity na sorority isi. The California Golden agba, Berkeley si egwuregwu ìgwè, mpi na Pac-12 Conference na-mara ha omenala njiko ịma aka na Stanford University.
Berkeley nwere 14 n'ụlọ akwụkwọ na kọleji, gụnyere a ọnụ ọgụgụ nke gụsịrị akwụkwọ na ọrụ ụlọ akwụkwọ, dị ka School of Optometry na Graduate School of Journalism. Ndị ọzọ gụsịrị akwụkwọ na mmemme awa na-agụnye ndị na-ukwuu họọrọ Haas School of Business,Gụsịrị akwụkwọ School of Education, College of Engineering na School of Law.
Berkeley a maara nke ọma dị ka a ga-ehiwe isi na-emesapụ amụrụ activism: The Free Speech Movement - a 1964 -amụrụ mkpesa na Berkeley omume na ochichi nke machibidoro omume ndọrọ ndọrọ ọchịchị - nweela zuru ebe nile anya. Ọwọrọiso Alumni agụnye mbụ U.S. Ụlọikpe Kasị Elu Chief Ikpe Ziri Ezi Earl Warren, Olympic Gold Medalist Jonny Moseley na omee John Cho, mara maka ya ọrụ ke “Harold na Kumar” fim. Dr. J. Robert Oppenheimer, na-arụ ọrụ na mmepe nke atọmịk bombu dị ka ndị ọkà mmụta sayensị director nke Manhattan Project n'oge Agha Ụwa nke Abụọ, bụ a prọfesọ na Berkeley.
Agụnye ngalaba nke Chemistry na Chemical Engineering.
Master na doctoral mmemme, onye nkụzi nkwadebe, Undergraduate obere omume na-edu ndú ọzụzụ.
Agụnye ngalaba nke Bioengineering; Civil & Environmental Engineering; Ọdụdọ Engineering & Computer Sciences; Industrial Engineering & Operations Research; Materials Science & Engineering; Mmụta mekanịkal injinịa; na Nuclear Engineering.
Agụnye ngalaba nke Architecture; Landscape Architecture; na City na Regional Planning.
Undergraduate degrees, MBA omume na onyeisi ọzụzụ.
Gụsịrị akwụkwọ na mmemme na ọmụma management usoro na data sayensị.
Abụọ afọ immersive Master nke Journalism mmemme.
Enyele J.D. na J.S.D. mmemme, na mbụ U.S. iwu ụlọ akwụkwọ na-enye M.A. na Ph.D. degrees na jurisprudence na-elekọta mmadụ iwu.
akwụkwọ ozi & Science
Berkeley kasị ukwuu na mahadum na-agụnye ihe karịrị 60 ngalaba na ndu sayensị, nkà na Humanities, anụ ahụ na sayensị, na-elekọta mmadụ na sayensị.
Agụnye ngalaba nke Agricultural na Resource Economics; Environmental Science, Policy, na Management; ekwukwa n'akwụkwọ Science; na Osisi na microbial Biology.
Professional usoro ihe omume optometry.
Master na doctoral omume na a dịgasị iche iche nke ahụ ike ọha ọzụzụ.
Richard na Rhoda Goldman School of Public Policy
nwe-, doctoral na ihe Undergraduate obere usoro ihe omume ọha na eze iwu.
Àjà-nwe, concurrent nwe, doctoral na nzere mmemme.
na 1866, onwe College of California zụrụ ala gụnyere nke ugbu a Berkeley campus. N'ihi na ọ kọrọ ego zuru ezu na-arụ ọrụ, ya mechakwara gbakwụnyeghachi na ala-agba ọsọ Agricultural, Mining, na Mechanical Arts College na-etolite na University of California, mbụ na-usoro ọmụmụ ọha mahadum dị na steeti.
Iri ngalaba òtù na fọrọ nke nta 40 ụmụ akwụkwọ mere elu ọhụrụ University of California mgbe ọ na-meghere ke Oakland na 1869. Frederick H. Billings bụ a trostii nke College of California na-atụ aro na mahadum-aha na nsọpụrụ nke Anglo-Irish ọkà ihe ọmụma George Berkeley. na 1870, Henry Durant, nchoputa nke College of California, ghọrọ ndị mbụ president. Na ẹkụre North andSouth Ụlọ Nzukọ 1873, mahadum kwagara ya Berkeley ebe na 167 nwoke na 22 nwanyi ụmụ akwụkwọ na ẹkenịmde ya mbụ na klas.
malite na 1891, Phoebe Apperson Hearst mere ọtụtụ nnukwu onyinye Berkeley, ego a nọmba nke omume na ụlọ ọhụrụ, na sponsoring, na 1898, mba mpi na Antwerp, Belgium, ebe French-atụpụta ụkpụrụ ụlọ Émile Bénard osụk emeri imewe a campus nwe plan. na 1905, na University Farm e guzobere nso Sacramento, n'ikpeazụ ịghọ University of California, Davis.By 1920s, ọnụ ọgụgụ nke campus ụlọ toro n'ụzọ, na gụnyere iri abụọ owuwu mere site-atụpụta ụkpụrụ ụlọ John Galen Howard.
Robert Gordon Sproul jere ozi dị ka onyeisi oche site 1930 ka 1958. site 1942, na American Council on Education họọrọ UC Berkeley abụọ naanị Harvard University nke ọnụ ọgụgụ ndị na-akwanyere ùgwù ngalaba.
N'oge Agha Ụwa nke Abụọ, esonụ Glenn Seaborg si ahụ-nzuzo chọpụtara nke plutonium, Ernest Orlando Lawrence si radieshon Laboratory malitere kpum na U.S. Army ịzụlite atọm bọmbụ. UC Berkeley physics prọfesọ J. Robert Oppenheimer aha ya bụ ọkà mmụta sayensị na isi nke Manhattan Project na 1942. Yana Lawrence Berkeley National Laboratory (n'oge gara aga na radieshon ụlọ nyocha), Berkeley bụ now a onye na ijikwa abụọ ọzọ labs, Los Alamos National Laboratory (1943) na Lawrence Livermore National Laboratory (1952).
na mbụ, ọzụzụ agha bụ iwu na nwoke undergraduates, na Berkeley debere ihe ngwá agha maka nzube. na 1917, Berkeley si ROTC omume e guzobere, na ya School of Military Aeronautics zụrụ n'ọdịnihu akwọ, tinyere Jimmy Doolittle, onye gụsịrị akwụkwọ na a B.A. na 1922. Ma Robert McNamara na Frederick C. Weyand gụsịrị UC Berkeley si ROTC mmemme, ịkpata B.A. degrees na 1937 na 1938, karị. na 1926, n'ọdịnihu nsoro ochiagha Chester W. Nimitz ike mbụ Naval Reserve Officers Training agha unit na Berkeley. N'oge Agha Ụwa nke Abụọ, ndị agha na ụba ya edidu na campus na n'oru ọzọ ọrụ, na site 1944, karịrị 1,000 Berkeley ụmụ akwụkwọ e debara aha na V-12 Navy College Training Program na naval ọzụzụ akwụkwọ maka dizel engineering. The Board of Regents biri manye ọzụzụ agha na Berkeley na 1962.
N'oge McCarthy oge 1949, ndị Board of Regents nakweere ihe mgbochi-Kọmunist iguzosi ike n'ihe iyi. A ọnụ ọgụgụ nke ngalaba òtù jụrụ na a chụrụ; iri afọ gafere tupu ha anabatawo na azụ na-akwụ.
na 1952, na University of California ghọrọ onye kwadoro iche Berkeley campus. Onye ọ bụla campus e nyere ikwu obodo kwụụrụ na ya chancelo. Mgbe ahụ-president Sproul chere onyeisi oche nke dum University of California usoro, na Clark Kerr ghọrọ ndị mbụ chancelo nke UC Berkeley.
Berkeley nweela a aha nke-amụrụ activism na 1960 na Free Speech Movement nke 1964 na mmegide na Vietnam Agha. Na nke ukwuu n'ihu ọha Ndị mmadụ Park mkpesa 1969, ụmụ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ ekwekọghị n'elu ojiji nke a ibé ala; na National Guardwas na-akpọ na na ime ihe ike bilitere. Mgbe gọvanọ California Ronald Reagan akpọ Berkeley campus “a ogige eden Kọmunist akwado, protesters, na mmekọahụ deviants.” Modern ụmụ akwụkwọ na Berkeley ndị na-erughị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nọ n'ọrụ, na a ukwuu pasent nke moderates na-agbasochi omenala. Democrats ọtụtụ karịa Republicans na ngalaba site a ruru nke 9:1.
Dị iche iche ụmụ mmadụ na ụmụ anụmanụ ikike iche iche megidere Berkeley. Native America megidere akwụkwọ ahụ n'elu repatriation nke foduru si Phoebe A. Hearst Museum nke Anthropology. Animal-akwado ihe ndị ruuru egwu ngalaba òtù eji ụmụ anụmanụ maka nnyocha. The ụlọ akwụkwọ omume osisi sitters mkpesa ewu mere ka esemokwu ndị obodo.
on May 1, 2014, UC Berkeley na aha ya bụ otu n'ime iri ise na ise agụmakwụkwọ ka elu oru n'okpuru nchoputa site Office nke Civil Rights “maka na o kwere omume imebi nke gọọmenti etiti iwu n'elu njikwa nke mmekọahụ ime ihe ike na mmanye egwu mkpesa” site White House Task Force Chebe Mmụta si Ndina n'Ike. The nchoputa na-abịa mgbe 31 nwanyi ụmụ akwụkwọ mere atọ gọọmenti etiti mkpesa: mbụ, a Clery Actcomplaint gbara akwụkwọ na May 2013, Ọzọkwa, mgbe a enweghị nzaghachi si University, a abụọ Clery Act Mkpesa na Mbụ na IX mkpesa na-gbara akwụkwọ na February 26, 2014. Nnyocha nọgidere n'ime 2016, na ọtụtụ akwụkwọ ndị ndia wepụtara na April 2016, egosi a ụkpụrụ nke akwukwo iyi egwu mmekọahụ na firings nke na-abụghị tenured mkpara.
Ị chọrọ atụle University of California, Berkeley ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
University of California, Berkeley na Map
photos: University of California, Berkeley ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke University of California, Berkeley.